‘कुटुमा कुटु’ ले नाघ्यो एक करोड भ्युअर्स, मेकिङबारे राजनराज शिवाकोटीको यस्तो खुलासा | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
२०७४ फाल्गुन ७, सोमबार , नेपाली समय : ०१:३० pm | आजको खबर, संचालक : रेनुका बराल/९८४१७१६४६५ सूचना विभाग दर्ता नं. ७४/०७३-७४, सम्पादक- डिल्लीरमण सुवेदी/९८५१२७७७२१
काठमाडौं, ३ साउन, कम्पोजर, गीतकार एवं गायक राजनराज शिवाकोटी पछिल्लोसमय सफल कम्पोजरका रुपमा गनिएका छन् । त्यत्तिकै रुपमा उनी सफल पनि भएका छन् । पछिल्लो कुनै हिट गीत बजारमा सुन्नुपर्दा उनकै गीत सुन्न पाइन्छ जस्तो कि सुर्के थैली खै..., पूर्वपश्चिम रेल..., कुटुमा कुटु... ।
‘कुटुमा कुटु’ गीत (चलचित्र ‘२ रुपैयाँ’) निकै चर्चित छ । यो गीतको भ्युअर्स यु–ट्युबमा एक करोड नाघेको छ । सो अवसरमा सोमबार निर्माण पक्षले खुशीसमेत साटासाट गरेको छ । फिल्म युनिटसंग निर्माण पक्षले केक काट्दै खुशियाली साटेको हो । खुसियाली साट्नलाई कम्पोजर, गीतकार तथा गायक राजनराज शिवाकोटीसंगै भिडियोमा देखिएकी स्वस्तिमा खड्का, निर्देशक असिम शाह, अभिनेता आसिफ शाह, नृत्य निर्देशक कविराज गहतराज लगायतको उपस्थिति थियो । चलचित्रको दृश्यमा भने निश्चल बस्नेत र बुद्धि तामाङ पनि देखिएका छन् ।
गत मे २८ तारिखमा यु–ट्युबमा अपलोड गरिएको यस गीतलाई २ महिना नबित्दै करोड भन्दा बढी पटक हेरिएको हो । यस गीतमा शब्द र संगीत राजनराज शिवाकोटीको रहेको छ भने यसको स्वरमा पनि राजनराजलाई मेलिना राई र राजन इशानले साथ दिएका छन् ।
आखिर के छ यो गीतमा त्यस्तो जसले यतिविधि हिट बनायो ? त्यतिमात्र होइन यो गीतको ‘मेकिङ’ के हो ? यस सम्बन्धमा राजनराज शिवाकोटीले आजको खबरलाई खुलेर रहस्य खोलेका छन् ।
आजको खबर– कुटुमा कुटु भन्ने गीत निकै हिट भयो । यसको मेकिङ के हो ?
राजनराज– यो गीतको कन्सेप्ट चार पाँच वर्षदेखि बनाएर राखेको थिएँ । तर अचानक २ रुपैयाँ चलचित्रमा राख्ने भनेपछि मलाई हल्का च्यालेन्ज बढ्यो । म यो गीतको शब्द फाइनल गर्न दोलखामै पुगें । दोलखाको भीमेश्वर गाउँपालिका डाँडाबारी मेरो गाउँ हो । मेरो घरमाथि मौवाको रुख छ । त्यो रुख र मेरो ट्युनिङ मिल्छ । त्यसकै पतकर ओछ्याएर ढुंगाको सिरानी बनाएर ढल्केर मैले शब्द फाइनल गरें ।
आजको खबर – किन त्यस्तो गर्नुपर्‍यो ?
राजनराज –गीतलाई जीवन्त बनाउन । यथार्थपरक गीत होस् भनेर ।
आजको खबर – शब्दमा वर्णन गर्नुस् न ?
राजनराज – यो स्वास्थ्यवर्धक पनि छ । ‘खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ...’ भनी गीतमा प्रश्न गरी यस्तो नगर्न सचेत गरिएको छ । त्यस्तै मेरै गाउँको ठाउँ पनि राखें ‘डाँडाबारीको सुन्तला गुलियो छ कि अमिलो’ । ‘छिमेकी हुँ म बाघैको सन्तान काली नागैको’ मेरा कुलदेवता कालीनाग हुन् । यो गीत वास्तवमा मेरै वरिपरि घुमेको छ ।
आजको खबर – कुनै बिम्ब ?
राजनराज – छ नि बिम्ब पनि । जस्तो कि ‘बिर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो’ । यसले प्रेममा नपरेको व्यक्ति अन्जानमै प्रेममा परेको संकेत दिन्छ ।
आजको खबर – अनि एक टेकै ओके भयो त गीत ?
राजनराज – मैले फाइनल गरेपछि पुनः रिभोकल दिएको थिएँ । किनकि आफैलाई चित्त बुझेन । आफै फिल गरेर नै रिभोकल गरेको हुँ । अरुलाई त थाहा नै भएन ।
कम्पोजिङ, लिरिक्स र सिंगिङ गरी झण्डै ५५० गीत बनाइसकेका राजनराजका यसअघिका चलचित्रका गीतहरु वडा नम्बर ६ को 'सुर्के थैली...' र 'छक्का पञ्जा' को 'पूर्व पश्चिम रेल...' हो । उनको 'कमलीको बिहे' चलचित्रको 'ट्वाक्कनटुक्कन...' भन्ने गीत पनि आउँदैछ ।